China GS Super 10 Micron Polyolefin Shrink Firimu fekitori uye vagadziri | GS PACK
GS Standard Polyolefin (POF) 5-Layer Co-Yakawedzeredzwa Heat Shrinkable Firimu kubva kuGPS PACK, ine yakajeka yakajeka uye yakaderera density, Iyi yehupfumi uyepractical yekudzora firimu ine iri nani mhepo chipingamupinyi pfuma kupfuura 3-matera firimu zviri pachena, Panguva yekupakata, iri biaxial Yakatemerwa shrinkable pane yakatsiga uye yakaenzana shrinkage (inopfuura 60%); kukwirira kwakasimba, nekona yakapfava uye chisimbiso chehemmetic, isina-brittle, yakadzika tembiricha kuramba, isina kukuvadza uye isinganhuwi, isina hunyoro-humbowo, ndiyo yakanyanya kutsiva PVC shrinkfilms.
GS Standard Polyolefin (POF) 5-Layer Co-Yakawedzeredzwa Heat Shrinkable Firimu kubva kuGPS PACK, ine yakajeka yakajeka uye yakaderera density, Iyi yehupfumi uyepractical yekudzora firimu ine iri nani mhepo chipingamupinyi pfuma kupfuura 3-matera firimu zviri pachena, Panguva yekupakata, iri biaxial Yakatemerwa shrinkable pane yakatsiga uye yakaenzana shrinkage (inopfuura 60%); kukwirira kwakasimba, nekona yakapfava uye chisimbiso chehemmetic, isina-brittle, yakadzika tembiricha kuramba, isina kukuvadza uye isinganhuwi, isina hunyoro-humbowo, ndiyo yakanyanya kutsiva PVC shrinkfilms. Inogona kuchengetedza zvigadzirwa zvako zvakanaka kwazvo nekudzivirira kutaridzika kwezvigadzirwa kubva muguruva uye nekunhuwirira kunoshamisa.
Ichi ndicho chakanyanya kudhura zveFirimu chigadzirwa chinoenderana nezvose otomatiki uye semi-otomatiki shrink kurongedza michina Ichi chigadzirwa zvakare chakasimbiswa neAmerican mhando Standard (FDA) uye yapfuura inoratidza zvinoenderana nemiedzo yekuyedza.
Hunhu hwePET kupisa inodzora polyester firimu: inogadzikana patembiricha, inodzikira kana yatsamwa (pamusoro peiyo girazi tembiricha tembiricha), uye kupisa kunodzikira kupfuura 70% munzira imwechete.
Zvakanakira kupisa zvinopisa polyester firimu kurongedza ndeiyi:
• Ganda iri pachena uye rinoratidza mufananidzo wechigadzirwa.
• Nyatso simbisa kurongedza, kwakanaka kupesana-nekuparadzira.
• Dzivirira mvura, unyoro, uye chando.
• Hapana kupora, iine imwe anti-yekunyepedzera basa. Kupisa-kunodzikira polyester firimu inowanzo shandiswa mune zvirinani chikafu, chinwiwa musika, zvigadzirwa zvemagetsi, uye zvigadzirwa zvesimbi. Kunyanya, kudzikira zvinyorwa ndidzo nzvimbo huru dzekushandisa. Nekuti nekukurumidza kukura kwePET mabhodhoro echinwiwa, mabhodhoro ezvinwiwa senge cola, sprite, uye majusi akasiyana siyana anoda kuti PET kupisa kupisa shrinkable firimu kuti iwirirane neyekupisa chisimbiso zvinyorwa Izvo ndezve chikamu che polyester uye zvine hushamwari nharaunda zvinhu zviri nyore kudzokororazve. shandisa.
Pamusoro pekushandiswazve semavara ekudzikira, mafirimu epolyester anopisa-pari zvino ave kushandiswawo kurongedza kwekunze kwezvinhu zvezuva nezuva. Nekuti haigone chete kudzivirira zvakapetwa zvinhu kubva mukuvhunduka, kunaya, hunyoro, uye ngura, asi zvakare inoita kuti chigadzirwa chikunde vashandisi neyakagadzirwa zvakanaka zvakadhindwa ekunze, uye inogona kuratidza zvakanaka mufananidzo wakanaka wemugadziri. Mazuva ano, vagadziri vekuputira vanowedzera vanoshandisa yakaderedzwa shrink firimu kutsiva yechinyakare yakajeka firimu. Nekuti iyo yakadhindwa inodzora firimu inogona kusimudzira kutaridzika kwechigadzirwa, zvinobatsira kushambadzira kwechigadzirwa, uye chiratidzo chechiratidzo chinogona kuva nepfungwa yakadzika mumoyo yevatengi.
Ukobvu Micron ASTM-D 374 10um
Kuwandisa g / cm3 ASTM-D 1505 0.92
Yemahara Shrinkage % ASTM-D 2732 MD 62
Tensile Simba N / mm2 ASTM-D 882 MD 115
Musodzi Kuramba N ASTM-D 1938 MD 3.5
Chisimbiso Simba N / 15mm Q BT 23-58 10
Mukati Dhayamita Inch 3
Pashure: GS Hot Slip Polyolefin Shrink Firimu
Zvadaro: Fekitori Kupa Transparent Polyolefin POF Kupisa Shrink Kuputira Firimu
Deluxe Polyolefin Shrink Firimu
Opti Polyolefin Shrink Firimu
Polyolefin Shrink Firimu Gauge
Polyolefin Shrink Firimu Mu Usa
GS Standard Polyolefin Shrink Firimu
Polyolefin Pof Shrink Kuputira, Polyolefin Pof Shrink Firimu, Polyolefin Shrink Kuputira Tembiricha, Shrink Kuputira Firimu Rolls, Shrink Firimu Pvc, Tambanudza Firimu Vs Shrink Kuputira,